Neymar oo ciyaaraha aduunka ka baxay – LaacibOnline
Neymar oo ciyaaraha aduunka ka baxay
Juan oo jilibkiisa ku dhufanaya ciyaaryahan Neymar
Ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara xulka qaranka Brazil ee Neymar ayaa ka baxay ciyaaraha aduunka ee sanadkan 2014-ka, kaddib markii uu ka dhaawacmay araxda.
Neymar ayaa laga saaray ciyaarta isaga oo dhaawac ah, markii ay ka soo gudbeen rubac dhamaadka ciyaaraha aduunka waxa ayna xulka qaranka Brazil ay Colombia kaga badisay 2-1 waxa ayna u geydbeen semi-finalka.
Dhaawacan araxda ka gaaray Neymar waxaa sababay ciyaaryahan Juan Zuniga oo jilibka ku dhuftay balse aanan loo ciqaabin.
Neymar, oo 22-jir ah ayaa ooynayey markii lagu qaaday bareelaha, kahor inta loo qaadin isbitaal kuyaala magaalada Fortaleza si loogu daweeyo.
Neymar oo ooynaya kaddib markii uu dhaawacmay
Ciyaaryahankan uga ciyaara kooxda Barcelona dhanka weerarka ayaa afarti jeer oo ay xulkiisa cayaareen koobka aduunka ee sanadkan 2014-ka uu dhaliyey 4-gool, waxuuna kamid noqday ciyaaryahanada goolasha badan dhaliyey koobkan aduunka.
Dadka ka faalooda arrimaha ciyaaraha kubadda cagta ayaa waxa ay sheegayaan in saameyn weyn ay ku yeelan doonto kooxda xulka qaranka Brazil, maqnaashaha Neymar iyo Thiago Silva oo laba jeer loo taagay karaka jaalaha ah inata ay ciyaarahan socdeen, iyadoo ay wajihi doonaan kooxda adag ee Germalka.
Waxa ay taxliiliyaasha intaa ku dareen in maqnaashaha laacibka Neymar ay dhabar jab ku tahay kooxdiisa, laakiinse ay fursad siin karto ciyaaryahan Willian oo weerarka ugu ciyaara xulka qaranka Brazil iyo kooxda Chelsea ee dalka Ingiriiska.
Neymar oo weerarka uga ciyaara xulka qarankiisa Brazil iyo Bercelona
← Somalia, UN scale up operations against desert locusts
Axad, Nov 22, 2020-Dowladda Itoobiya oo hub culus u adeegsaneysa si ay ula wareegto magaalada Mekella →
Natiijooyinka horyaalka Ingiriiska Sabtidan – BBC News Somali
November 20, 2020 Abdirisaaq 0
Messi oo ka fariistay ciyaaraha caalamiga ah
Qaniinyada Suarez iyo Cayaaraha Adduunka
November 24, 2020 Abdirisaaq 0
Dagaal culus oo subaxnimadii hore ee saakay ka dhacay deegaanka Bacaadweyn ee gobolka Mudug Isniin, November, 30, 2020 (HOL)